japanSamachar | धर्म/पर्व/राशिफल | यस्तो छ जनवरी २० पछिको राशिफल
(Japan)5th December | 2021 | Sunday | 2:46:17 PM || (Nepal) 11:31:17 AM
World 265707478 16738 5264135 365 239375473 86668
USA 499347910808608039498111 13725
India 346332550470620034060774 8944
Brazil 221382470615606021359352 8318
UK 10421104014555109188131 895
Russia 9769011028007208471813 2300
Turkey 888176007764508412434 1405
France 7875012011950607168139 2058
Germany 6143856010353005058200 4636
Iran 6131356013012405916199 3278
Argentina 5339382011664305200141 657
Spain 520295808815904927391 814
Italy 5094072013415204736202 732
Colombia 5078987012873304918619 342
Indonesia 4257489014386304105994 0
Mexico 3900293 2841 295154 251 3255802 4798
Poland 364902708563003116875 1978
Ukraine 349085508800203041385 177
South Africa 302056908996502855474 546
Philippines 283429404923002770726 899
Netherlands 272887601964202147154 600
Malaysia 265447403057402561232 490
Peru 224264602013600969
Czechia 222971503357601895484 1052
Thailand 2141241 4704 20942 27 2048815 1369
Iraq 208388902387302049194 105
Belgium 182746702716701358257 821
Canada 180507002976601746170 497
Romania 178512005702101699083 948
Chile 177062003846501662851 692
Japan 1727828 127 1836401708638 29
Bangladesh 157707002798901541886 1382
Israel 13454420819901331903 111
Vietnam 129477802606101007566 6788
Pakistan 1286825 372 2876761245606 854
Serbia 126241901187601206586 164
Sweden 121214501513601161927 43
Austria 119328601275301063484 648
Portugal 116300101851401085654 130
Hungary 11348690351220910745 566
Switzerland 10397300116120870684 213
Kazakhstan 975150 695 12769 15 941285 528
Jordan 9714010117150899555 1159
Cuba 963002083070954030 13
Greece 9626950185160868028 697
Morocco 9505010147870932835 347
Georgia 8618830122980801864 0
Nepal 8223920115400804108 0
UAE 742214021480737172 0
Slovakia 7221080147710587642 628
Tunisia 7182780253980691522 68
Bulgaria 7024540288050573112 677
Lebanon 677147087650634994 186
Belarus 662056051470650577 0
Croatia 6282410111500585743 317
Guatemala 6195420159800602343 5
Azerbaijan 594994079470562786 0
Ireland 589094057070454362 114
Costa Rica 567383073120552158 77
Sri Lanka 5669360144400542010 0
Saudi Arabia 549877088420539011 39
Bolivia 542859 770 192155497115 220
Ecuador 5268700332500443880 759
Myanmar 5241220191350499800 0
Denmark 506085029390443737 57
Panama 478831073730468661 20
Lithuania 478314068250444346 122
S. Korea 473034 5127 3852 43 407175 744
Paraguay 4633150164770446079 49
Venezuela 434133051860421495 681
Palestine 431588045460423777 51
Slovenia 428945052900393180 259
Kuwait 413464024650410701 3
Dominican Republic 408245042120401716 156
Uruguay 400821061320392388 16
Mongolia 383543 327 20163313256 192
Honduras 3782510104130122039 53
Libya 374280054800352416 0
Ethiopia 372090067940349557 214
Moldova 366162092080350192 165
Egypt 3622600206820300437 90
Armenia 340396076690320439 0
Oman 304581041130300021 2
Norway 28291801093088952 68
Bahrain 277803013940276096 2
Bosnia and Herzegovina 2772280126870192218 0
Singapore 26865907460258038 54
Latvia 256852042610241086 134
Kenya 255408053350248404 4
Qatar 24407106110241340 11
Estonia 224654018150207451 25
Australia 217843 1267 2050 8 196948 70
North Macedonia 217025076310203325 0
Nigeria 214567029800207427 11
Algeria 211297060960145054 15
Zambia 210294036670206454 7
Albania 201402031090191855 23
Botswana 195302024190192452 1
Uzbekistan 194333 228 14182190939 23
Finland 19122601360046000 51
Kyrgyzstan 183615 42 2758 1 178602 131
Montenegro 158283023240153758 60
Afghanistan 157431073120140617 1124
Mozambique 151868019410149575 8
Zimbabwe 138523047090128858 12
Cyprus 13652506010124370 49
Ghana 130920012090129042 5
Namibia 129638035730125523 1
Uganda 12761603254097597 115
Cambodia 120256 24 29604116609 0
El Salvador 119803037810102982 246
Cameroon 107148018040102716 152
Rwanda 10040401343045522 0
Maldives 920950253090103 23
Jamaica 9142102407062824 9
Luxembourg 907740880084834 17
Laos 78469020107339 0
Trinidad and Tobago 7453302236060202 22
Senegal 7401301886072101 2
Angola 6524401735063298 3
Malawi 6196602307058816 67
Ivory Coast 618170705060844 0
Réunion 611880384057781 18
DRC 5831901107050930 0
Guadeloupe 55284074802250 23
Fiji 525430697051116 0
Suriname 50993 33 1170029577 11
Syria 4853802772029624 0
Eswatini 4736801248045263 11
French Polynesia 46323063607
French Guiana 461420328011254 7
Martinique 4550107180104 1
Madagascar 448000972043119 3
Sudan 4348903164035491 0
Malta 398650468037638 2
Mauritania 395100838037828 16
Cabo Verde 384390351037968 23
Guyana 3811801004036170 18
Gabon 374770280033094 10
Papua New Guinea 353900550034322 7
Guinea 307700387029725 49
Belize 306800579028979 10
Togo 262910243025921 0
Tanzania 26270073007
Barbados 259640234023253 0
Haiti 255100747021644 0
Benin 248630161024546 5
Seychelles 235370127022912 0
Somalia 2305101331012325 0
Bahamas 228250695021615 1
Mauritius 219730455020164 0
Lesotho 218380663013741 0
Mayotte 21003018502964 0
Burundi 204390380773 0
Timor-Leste 198280122019700 0
Congo 189700354012421 0
Channel Islands 188930104016459 0
Iceland 18333035016721 4
Andorra 180100132016162 4
Mali 178120617015223 0
Curaçao 174700179017190 3
Nicaragua 17254021004225 0
Taiwan 166480848015639 0
Aruba 164320174016074 13
Burkina Faso 160000286015345 0
Brunei 15164098014718 1
Equatorial Guinea 135990175013346 1
Djibouti 135080187013294 0
Saint Lucia 130270282012636 9
South Sudan 127580133012463 2
Hong Kong 124530213012148 0
New Caledonia 122430278011704 10
New Zealand 12195 108 4405834 48
Isle of Man 11861066010881 1
CAR 11742010106859 2
Yemen 100210195306904 23
Gambia 9992034209640 1
Cayman Islands 75290703570 14
Eritrea 745806107240 0
Gibraltar 736009906902 1
Niger 7061026106693 2
Guinea-Bissau 6444014906275 0
Sierra Leone 6402012100
Dominica 612003905712 0
San Marino 597909305610 2
Grenada 5907020005632 2
Liberia 5824028705523 2
Bermuda 5751010605615 2
Chad 5701018104874 0
St. Vincent Grenadines 557907405077 7
Liechtenstein 484806204357 11
Sint Maarten 459807504504 10
Comoros 4542 14 15004313 0
Antigua and Barbuda 4147011704019 1
Saint Martin 397305601399 7
Monaco 387903603691 1
Faeroe Islands 379601303263 7
Sao Tome and Principe 373205603675 0
Turks and Caicos 310302503049 0
Caribbean Netherlands 302602202704 0
British Virgin Islands 280903807
Saint Kitts and Nevis 278902802749 1
Bhutan 26410302625 0
St. Barth 16030600
Greenland 15820001261 2
Anguilla 14140301323 0
Falkland Islands 830000
Macao 7700077 0
Saint Pierre Miquelon 5900032 0
Montserrat 4401041 0
Vanuatu60 106 0
China 99142 59 4636093470 12
यस्तो छ जनवरी २० पछिको राशिफल
POSTED ON : Tuesday, 21 January, 2020 | Views : 2160
तपाईँको लागि यो महिना सामान्य रहेको छ । तपाईँ काममा धेरै व्यस्त रहनु हुनेछ । शत्रुबाट सावधान रहनु पर्ने देखिन्छ । यो महिनाको अन्त्यमा तपाईँको समय निकै सकारात्मक रहनेछ । यो समयमा तपाईँले गरेको प्रयास सफल हुने देखिन्छ ।
करियरमा समस्या भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । नोकरीमा बदलीको सङ्केत देखिन्छ । आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । सवारीसाधन सावधानीपूर्वक चलाउनुस् । विगतमा गरिएका कामलाई लिएर विचार गर्नुस् । प्रेम सम्बन्धमा पनि खुशी छाउनेछ ।
नयाँ वर्षको पहिलो महिना तपाईँका लागि मुश्किलपूर्ण हुन सक्छ । शरीरमा आलस्यता छाउँदा कैयौँ काम बन्नै लाग्दा बिग्रन सक्छ । खासगरी व्यापारीका लागि यो महिनाको अन्तिमतिर कष्टपूर्ण रहेको छ । प्रेम सम्बन्धमा तेस्रो व्यक्तिका कारण समस्या आउन सक्छ ।
तपाईँका लागि यो महिना औसत रहेको छ । कानुनी विवादमा तपाईँले नै जित्नु हुनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् । तर प्रेमीसँग कुरा गर्दा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । क्रोधमा बोलिएको शब्द पछुताउनुको कुनै विकल्प हुँदैन ।
सिंह राशिका लागि यो महिना सङ्घर्षपूर्ण महिनाको रुपमा रहेको छ । कार्यस्थलमा बिना कारण विवादमा फस्न सक्नु हुनेछ । तर महिनाको मध्यपछि धन लाभको स्थिति बनेको छ । त्यस्तै महिनाको अन्त्य सुखद् रहेको छ । मानसिक शान्तिका लागि योग र प्राणायाम गर्नुस् ।
यो महिना कन्या राशिका लागि तनावले भरिएको महिना रहेको छ । यो समय तपाईँले धैर्यता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक स्थिति केही बिग्रनेछ । तर साथी र आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । अनावश्यक खर्चबाट बच्नुस् । तर महिनाको अन्त्यतिर अवस्थामा सुधार आउनेछ ।
यो महिना तपाईँका लागि निकै शुभ रहेको छ । सबै क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ । समाजमा मान, सम्मान बढ्नेछ । महिनाको अन्त्यतिर भने सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । स्थान परिवर्तनको योग छ । विदेश जान चाहनेहरुका लागि अवस्था राम्रो छ ।
यो महिना तपाईँले नजिककै साथीबाट धोका पाउन पर्ने हुँदा संयमता अपनाउनुस् । साझेदारीको काममा सतर्क रहनुस् । यद्यपि महिनाको अन्त्यतिर भने अवस्था सुध्रनेछ । रोकिएको काम बन्न थाल्नेछ । अचानक धन वृद्धिको योग रहेको छ ।
तपाईँका लागि यो महिना सङ्घर्षपूर्ण रहेको छ । मेहनता गर्दा पनि सोचेजस्तो हुन सक्दैन । आर्थिक स्थितिमा उचारचढाव देखिनेछ । बिना कारणको विवादमा फस्ने योग छ । घाटा तपाईँकै छ । नोकरीमा पदोन्नतिको समयमा व्यवधान देखिनेछ ।
यो महिना तपाईका लागि औसत रहेको छ । आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनै पर्छ । अचानक खर्च बढ्न सक्छ । जसका कारण मानसिक तनाव उत्पन्न हुनेछ । कुनै पनि नयाँ काम गर्दा पर्याप्त सोच्नुस् र ऋण लिनबाट बच्नुस् ।
तपाईँका लागि यो महिना राम्रो औसत छ । लाभको कैयौँ अवसरहरु सिर्जना हुनेछ । तर महिनाको अन्त्यतिर शनि राशिको परिवर्तनसँगै कष्ट बढ्दै जानेछ । मन अशान्त रहनेछ । शत्रु पनि बढ्ने छन् ।
तपाईँका लागि यो महिना राम्रो रहेको छ । आयमा वृद्धि हुने सङ्केत छ । सवारीसाधनको लाभ लिने योग पनि देखिन्छ । पारिवारिक माहोल शान्तिपूर्ण रहेको हुँदा मन पनि प्रसन्न रहनेछ ।
: यो राशिफल जनवरी २१ तारिखबाट २९ तारिखसम्मको हो
तीहारको शुभकामना : जापानमा भाईटिकाको उत्तम साईत १०:५१ बजे (देश अनुसारको साईत)
: Saturday, 06 November, 2021
तिहार आयो ! भाईटीकाको उत्तम साइत ११ बजेर २० मिनेटमा
: Monday, 01 November, 2021
दशैं आयो ! टीकाको शुभ साइत बिहान १० बजेर २ मिनेटमा
: Friday, 24 September, 2021
ओमिक्रोन कोरोना विश्वभर फैलंदो, ४३ देशहरुमा पुष्टि
इन्डोनेसियाको सेमेरु पर्वतमा ज्वालामुखी विस्फोटमा कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु
खागोशिमा प्रान्तको तोशिमामा ८८ पटक भूकम्पको कम्पन, थप भूकम्प आउने चेतावनी
कमल थापालाई हराउँदै राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी